နားခိုရာ: September 2008
Posted by little moon at 11:45 AM2comments:
Software သို့မဟုတ် Web application တစ်ခုကို "beta" လို့ပြောရင် အများက ... major features တွေအားလုံးမပါသေးဘူး။ Community ထဲမှာ enduser တွေက စမ်းသုံးကြပြီး ချို့ယွင်းချက်တွေ bugs တွေကို ပြင်ရဦးမယ်.. လို့ ယေဘူယ နားလည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာက Google ရဲ့ public product 49ခုမှာ 22ခုက beta ဖြစ်နေတာပါ။ (e.g Gmail, Google Docs) Feature တွေအသစ်တိုးတာသာမက version ပြောင်းသွားလဲပဲ beta လို့နံမည်တပ်ထားဆဲပါပဲ။ တစ်ချို့ကပြောကြတာကတော့ Google အနေနဲ့ နည်းပညာအထောက်အပံ့ မပေးချင်လို့ရယ် productမှာ ရှိနေနိုင်သေးတဲ့ အမှားအယွင်းတွေ ချို့ယွင်းချက်တွေအတွက် တာဝန်မခံချင်လို့ရယ် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ အမှားတော့ ရှိဦးမှာပေါ့ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့က beta version ပါလို့ပြောထားသားပဲ ....တိုတဲ့အချိုးမျိုးထင်ပါရဲ့။ ဒါမှမဟုတ် Google ရဲ့ product တွေကို သတ်မှတ်တဲ့ quality အဆင့်အတန်းက သိပ်မြင့်နေတာလား။ တစ်ချို့ product တွေဆိုရင် သူကသာ beta လို့ဆက်ပြီး သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ တော်တော်လေးကို ပြီးပြည့်စုံပြီး ကောင်းမွန်နေပါပြီ။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ product တစ်ခုကို ချို့ယွင်းချက်တွေ အမှားတွေ ပါကောင်းပါဦးမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ စောစောသုံးရတာနဲ့ ready ဖြစ်ပြီး အားလုံးနီးပါး ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ prodcut ကို ဖြစ်လာတော့မှ သုံးရတာ... ဘယ်ဟာကို ရွေးကြမလဲ?
Posted by little moon at 12:24 PM 1 comment:
မနေ့ညက Carling Cup တတိယအဆင့် Sheffield United နဲ့ပွဲမှာ မန်နေဂျာ Winger က သူ့ရဲ့ လူုငယ်စီမံကိန်းက လူငယ် ကစားသမား တွေကို ယုံယုံကြည်ကြည် ကစားစေခဲ့တယ်။
Hoyte - Djourou - Song - Gibbs
Wilshere - Ramsey - Randall - Mérida
ပုံမှန်ကစားနေကြ အသင်းကြီးက ကစားသမားဆိုလို့ Bendtner, Song နဲ့ Djourou ပဲပါတယ်။ သူတို့တောင် အသင်းကြီးမှာ အရန်လူ အနေနဲ့ပဲကစားရတာများတယ်။ ဒီအသင်းရဲ့ average age က ၂၀ အောက်ပဲရှိတယ်။ Wilshere ဆိုရင် (၁၇)နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ပထမပိုင်းမှာတင် သုံးဂိုးပြတ်နိုင်နေပြီ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ သုံးဂိုးထပ်သွင်းတယ်။ Carlos Vela သုံးဂိုးသွင်းပြီး Hat-trick ရသွားတယ်။
Henri Lansbury > Alex Song
Jay Simpson > Nicklas Bendtner ——– (70)
Francis Coquelin > Fran Mérida
ဒုတိယပိုင်းမှာ သုံးယောက်လဲကစားတယ်။ Song နဲ့ Bendtner ကို နားခိုင်းလိုက်ပြီး မျက်နှာသစ်ကလေးတွေကို ကစားခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ပွဲပြီးတဲ့အထိ အောက်က လူစာရင်းနဲ့ ကစားသွားတယ်။
Coquelin - Hoyte - Djourou - Gibbs
Lansbury - Randall - Ramsey - Wilshere
Carling Cup ပြိုင်ပွဲဆိုတာ Arsenal လူငယ်ကစားသမားတွေအတွက် တစ်ချိန်မှာ အသင်းကြီးကို ရောက်ရှိလာဖို့ လေ့ကျင့်တဲ့ ဓါးသွေးကျောက်လို ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲကို ကစားခဲ့ပြီး အခု အသင်းကြီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ သူတွေအများကြီးပါ။ Bendtner, Gael Clichy, Eduardo, Alex Song, Emmanuel Eboue, Cesc Fabregas နဲ့ Theo Walcott အားလုံး ဒီ Carling ပွဲတွေကစားခဲ့ပြီး တောက်ပြောင်လာခဲ့ကြတာပါ။
မန်နေဂျာကြီးဝင်းဂါးတစ်ယောက် အပြောင်းအရွှေ့ကာလတွေမှာ ကစားသမားတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ဖို့ တုံ့နှေးနေတာ သူပျိုးထောင်နေတဲ့ လူငယ်ကစားတွေကြောင့် အများကြီးပါတယ်။ မနှစ်ကလဲ Carling Cup မှာ Semi-final မှာ စပါးကို ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအထိ အခုလိုပဲ လူငယ်ကစားသမားလေးတွေနဲ့ပဲ ကစားစေခဲ့တာ။
လူငယ်လေးတွေကို အားကိုးအားထားပြုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Champisons League လိုပြိုင်ပွဲမျိုးတွေကစားရင် Premier League မှာ ManU, Chelsea, Liverpool တို့လို ထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင် ပြိုင်ပွဲကို အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေတဲ့၊ အသင်းကို ပဲ့ကိုင်မောင်းနှင်နိုင်မဲ့ အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားတွေလဲ လိုအပ်သေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ပျိုးထောင်လာတဲ့ ကစားသမားတွေ အကောင်းဆုံးအနေအထားကို ရောက်လာပြီဆို အခြားအသင်းတွေ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဥပမာ AC Milan ကို ပြောင်းသွားတဲ့ Flarmini လိုမျိုးပေါ့။ အသင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလာပြီး ခြေစွမ်းထက်လာချိန်မှာ အရင်လို လူငယ်လစာမျိုးနဲ့တော့ ဘယ်အဆင်ပြေ နိုင်မလဲ။ ထိုက်သင့်သလောက် တိုးမြှင့်ပေးပြီး ထိန်းထားရမှာပေါ့။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ Arsenal ဟာ လူငယ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး ခြေစွမ်းထက် တန်ဖိုး တက်လာချိန်မှာ ထုတ်ရောင်းစားနေရတဲ့ အသင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ထုတ်ရောင်း တာတောင် အသင်းရဲ့ကစားကွက် ကစားဟန်ပျက်မသွားအောင် ထိန်းထားနိုင်တဲ့ မန်နေဂျာကြီး ၀င်းဂါးကိုပဲ ချီးကျူးရမှာပဲ။
Posted by little moon at 12:45 PM 1 comment:
အခု ဘလော့တွေဖတ်ရတာ Google Reader လေးနဲ့ အတော့ကို အဆင်ပြေနေပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကဆိုရင် ရွာရိုးကိုးပေါက် တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက်နဲ့ အတော့်ကို အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေ Post အသစ်တင်လားမတင်လားဆိုတာ သွားကြည့်မှ သိတာပေါ။
အခု Google Reader လေးနဲ့ ဘလော့တွေကို RSS Feed subscribe လုပ်ထားလိုက်ရင် သူတို့အသစ်တင်လိုက်တာနဲ့ Reader ထဲကို ရောက်လာတယ်။ Email အသစ်ဝင်သလိုပေါ့။ ကျွန်တော့်အတွက် အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘလော့ကာအများ သိပြီးသားနဲ့ အသုံးပြုနေကြမယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်အတွင်းကလူတွေ ကျော်ခွပြီး မကြည့်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ဒီ Reader လေးနဲ့ blog ကို ဖတ်လို့ရတယ်။ blogspot မှာတင်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပါရင်တော့ ပို့စ်ကို သာဖတ်လို့ရပြီး ပုံကို မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ Reader လေးနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ရဲ့ ဘယ်ပိုစ့်က ဖတ်ပြီးပြီ မဖတ်ရသေးဘူး ဆိုတာ သိနေတယ်။ ဘလော့တကာကို နေ့စဉ် လိုက်ဝင်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ Comment ရေးချင်တဲ့အခါမျိုးကြမှသာ အဲဒီဘလော့ကို သွားပြီးရေးရုံပဲ။
Posted by little moon at 8:00 AM4comments:
Posted by little moon at 2:07 PM5comments:
ကျွန်တော့်အကိုကြီး request လုပ်ထားတာတော့ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့မှပဲ စပြီးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်။ ကိုနဗနရဲ့ Bagan.net forum ရယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ Nativemyanmar.net မှာ ဆက်ရေးနေတဲ့ myself ဆိုတဲ့ Topic ကြီးကို Blog တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ပါ။
ဘ၀အစုံကျင်လည်ခဲ့ရသလို စာရေးလဲ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အကိုကြီးရဲ့ စာတွေကို တခြားလူတွေကိုလည်း ဖတ်ရှုစေချင်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ကပဲ တာဝန်ယူပြီး blogပေါ်တင်ပေးနေတာပါ။ Forum မှာတုန်းက win kalaw font နဲ့ ရိုက်တာဆိုတော့ post တစ်ခုဆီကို ကိုမောင်လှရဲ့ ဘလော့မှာရှိတဲ့ win2zawgyi converter နဲ့ ပြောင်းပါတယ်။ စာပိုဒ်တွေ လိုသလိုခွဲပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို မြန်မာလိုရိုက်ထားရင် ပြင်ပေးပါတယ်။ (ဖိုရမ်မှာ အင်္ဂလိပ်မြန်မာပြောင်းရိုက်ရတာခက်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ်လုံးနှစ်လုံးဆို ဗမာအသံထွက်နဲ့ပဲ ရိုက်လိုက်ကြတာများတယ်။ Forum မှာတုန်းက သူ့ဘ၀အကြောင်းကို တောက်လျောက် အဆင်ပြေသလို ရေးချသွားတာ။ အခု ဘလော့ပေါ်တင်တော့ ကျွန်တော့်ဘာသာ သင့်တော်သလို စုပေါင်းခြင်း ခွဲထုတ်ခြင်း အမျိုးအစားခွဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ အတော်လေး ပုံပေါ်လာမှ ကိုနဗနစိတ်ကြိုက် ပြင်ပါလိမ့်မယ်။ သူရေးတုန်းက ခေါင်းစဉ်တပ်မရေးပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်လေးတွေက ကျွန်တော့်ဘာသာ တော်သလို တပ်ထားပေးတာ။ ဖတ်မယ်ဆိုရင် သူ့ဇာတ်လမ်းအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်အောင် 01 Label တပ်ထားတဲ့ဆီက စဖတ်ရပါမယ်။ အောက်ဆုံးက ပိုစ့်က စဖတ်ကြပါ။
ကြီးတော်ခင်ဦးမေစတိုင်ဖမ်းပြီး 07 ယူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ navana လို့ပဲ ယူမလို့ မရတာနဲ့ 07 ထည့်ပေးလိုက်ရတာပါ။
Posted by little moon at 4:47 PM6comments:
Posted by little moon at 11:21 AM4comments:
ကျွန်တော့်ဘလော့ကလေးကို လာလည်ကြသူများ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ .... ကျွန်တော့် ဘလော့အိမ်လေးကို အလည်ရောက်မှတော့ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ကြပါဦးဗျာ .... :P
Posted by little moon at 12:08 PM6comments:
သမီးသွားတောင်းတယ်၊ တောင်းရမ်းတယ်၊ မြန်းတယ် စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတာပေါ့။ ပြောချင်တာက သတို့သားလောင်းဖက်က မိဘစုံရာနဲ့ သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အိမ်ကို သွားရောက်တောင်းရမ်းကြတာပေါ့။ သတို့သမီးဖက်နဲ့သိတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးတော့ အနည်းဆုံး ခေါ်သွားရတာပေါ့။ သူကပဲ ဒိုင်ခံ မိတ်ဆက် စကားလမ်းကြောင်း ပြီး ဒိုင်ခံပြောလေ့ရှိတာပေါ့။ ဘာတွေဘယ်လိုပြောပေးရတယ်တော့မသိဘူး။
ကိုယ့်တုန်းကတော့ အဖေနဲ့အမေကိုခေါ်ပြီး သူတို့အိမ်ကို မုန့်ဟင်းခါးစား အလည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြီးသွားတာ။ စားကြသောက်ကြရင်း အလာဘ သလာဘပြောကြပေါ့။ နှစ်ဖက်မိဘတွေက အားလုံး အစိုးရ၀န်ထမ်း လုပ်ခဲ့တာဆိုတာ့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်ကဲသို့ဘာညာနဲ့ လေပေးတဲ့သွားကြလေရဲ့။ ကိုယ်တို့ကိစ္စအတွက်ကတော့ မင်းတို့ဘာသာ အဆင်ပြေသလိုလုပ်ကြပါတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ်။ ကောင်းရော။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ ရပ်ရွာတွေမှာက မိန်းမတောင်းရမ်းတဲ့နေရာမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဓလေ့တွေ ရှိတယ်ဗျ။ တစ်ခါတုန်းက စစ်ကိုင်းတိုင်း မော်လိုက်ခရိုင် ဖောင်းပြင်ဒေသမှာ တာဝန်ကျတဲ့ ကျောင်းဆရာကြီးကို ရွာက လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ သူ့မိဘတွေက ဆရာကြီးခင်ဗျား ...တစ်ဖက်ရွာမှာ မိန်းမလိုက်တောင်းပေးပါတဲ့။ ဆရာကြီးကလည်း .. အေး လိုက်တောင်းပေးမယ်လို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ ဆရာကြီးက ၀တ်ကောင်းစားလှ ၀တ်လို့ပေါ့။ လူငယ်ရယ် သူ့မိဘတွေနဲ့ တစ်ဖက်ရွာကို ကုန်းကြောင်း ချီတက်သွားကြတာပေါ့။ သတို့သမီးလောင်း အိမ်နားရောက်တော့ လူငယ်က ဆရာကြီကို ကပ်ပြီးမှာသတဲ့။ ဆရာကြီးခင်ဗျား ကျွန်တော်က ပြေးလို့ပြောရင် ပြေးပါဆရာကြီး...တဲ့။ ဆရာကြီးက ဘာကိုပြေးရမှာတုန်းပေါ့ ဇဝေဇ၀ါနဲ့။
သူတို့သမီးအိမ်ရဲ့ ခြံရှေ့ရောက်တော့ ...လူငယ်ကအော်ပြောသတဲ့ .. ကျွန်တော်တစ်ဖက်ရွာက မောင်ဘယ်သူပါ.... ဦး.ဘယ်သူ ဒေါ်ဘယ်သူတို့ရဲ့ သမီး မအဲခွေးကို မိသားဖသားပီပီလာတောင်းပါတယ် ခင်ဗျားတဲ့..... အဲဒီလို အော်ပြောလိုက်တာနဲ့ သတို့သမီးအ်ိမ်ပေါ်ကလူတွေက ဘယ်ကကောင်တုန်းကွ...ဆိုပြီး ဒေါသဖြစ်တဲ့ မျက်နှာထားတွေနဲ့ ပြေးဆင်းလာကြသတဲ့။ ရန်လိုပြီး ရိုက်မယ်နှက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့။ လူငယ်က ဆရာကြီးကို ပြေးတော့ဆရာကြီး ပြေးပါ ပြေးပါလို့ အော်သတဲ့။ ပြီးတော့ သူရယ် မိဘနှစ်ယောက်ရယ် သုတ်ခြေသင်ပြီး ပြေးပါလေရောတဲ့။ တစ်ဖက်က လူအုပ်ကြီးကလည်း ရိုက်မယ်နှက်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ ဆရာကြီးလဲ တအားလန့်သွားပြီး လူငယ်နဲ့ သူ့မိဘတွေနောက်ကို နောက်ကျတဲ့ခြေတောက် သစ္စာဖောက်ဆိုပြီး အတင်းပြေးရတော့တာပေါ့။
ရွာအစွန်လောက်ရောက်တော့ လူတွေကဆက်မလိုက်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့သူတို့လည်း ပြေးရာကရပ်လို့ အမောဖြေကြတာပေါ့။ ဆရာကြီးက ...မင်းကွာ... ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ ကြိုတင်ပြီး မပြောဆိုထားဘူးလား. .... ဆိုတော့ သည်းခံပေးပါဆရာကြီး.. အောင်မြင်တဲ့အထိလုပ်ပေးပါ.. ဒီဒေသရဲ့ထုံးစံပါတဲ့။ ဆရာကြီးလဲ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ပေါ့။ ဒါနဲ့ သတို့သမီးလောင်းအိမ်ကို တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြပြန်ရော။ ခုနကလိုပဲ လူတွေ ထွက်လိုက်ကြလို့ ပြေးရပြန်ရော။ ဆရာကြီးလဲ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်ပြီး ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပေါ့။
သုံးခေါက်ပြေးပြီးသွားလို့ လေးခေါက်မြောက်အခေါက်ကြမှမှ အိမ်ပေါ်ကလူကြီးတွေက ... အေး ... မင်းက ငါတို့သမီးကို ကျွဲလိုနွားလို လုပ်ကျွေးမှာလား..တဲ့မေးရော။ လူငယ်ကလည်း လုပ်ကျွေးပါမယ်ခင်ဗျာပေါ့ ... ဒီလို အနည်းငယ် ပြောဆိုပြီးမှ ခြံတံခါးဖွင့်ပေးပြီး အိမ်ပေါ်တက်ရသတဲ့။ သမီးရှင်ဖက်ကို ဘယ်လောက်လေးစားတယ် တန်ဖိုးထားတယ် အနွံအတာခံတယ်ဆိုတာ ပြတဲ့သဘောတဲ့။ ဖြစ်ရလေ။ (တော်သေးလို့ ကိုယ့်တုန်းကသာ အဲဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင် ခုနစ်ထပ်တိုက်ပေါ် သုံးလေးခါ အတက်အဆင်းလုပ်ရရင် မိန်းမမရပဲနဲ့ အသက်ထွက်သွား နိုင်တယ် :D )
ပြောကြဆိုကြနဲ့ ကိစ္စတွေပြီးလို့ ကိုယ့်ရွာဖက်ပြန်ကြတော့ အတော့်ကို မောပန်းပြီး ချွေးတွေရွှဲနေတဲ့ ဆရာကြီးက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ပြောလိုက်တာက ....မင်းကွာ ခွေးသွားတောင်းတာတောင် ဒီလောက်ပြေးနေရရင် လူသာတောင်းရင်တော့ ခက်ရချေရဲ့ ... (သတို့သမီးနံမည်က မအဲခွေးကိုး) :D
မိန်းမလိုက်တောင်းပေးမယ်ဆိုရယ် ဘယ်ဒေသလဲဆိုတာအရင်မေးဦးနော် .... မဟုတ်ရင် ဆရာကြီးကို ဘုမသိဘမသိနဲ့ ပြေးနေရဦးမယ် ဟားဟား ...
လက်ထပ်တော့မဲ့ ကောင်မလေးတွေ...ကိုယ့်ချစ်သူက တကယ်ချစ်လား တန်ဖိုးထားလား.. သိချင်ရင် အဲဒီလိုလေး တောင်းရမ်းခိုင်းလိုက်ပေါ့ ..... :P
Posted by little moon at 12:54 PM5comments:
ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ သားကို ခေါင်းရိတ်ပေးထားတယ်။ ရေချိုးရင် ခေါင်းလျှော်ပေးပေမဲ့ ဦးရေပြားပေါ်မှာ မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ အညစ်အကြေးလေးတွေ အဆီလိုဟာလေးတွေက ခေါင်းရိတ်လိုက်မှ ထွက်သွားတယ်။ အခုကတုံးလေးနဲ့ဆိုတော့ ထွန်းလင်းထွန်း ကနေ ထွန်းလင်းပြောင် ဖြစ်နေတာပေါ့ .... :D
Posted by little moon at 10:11 AM6comments:
LHC ဆိုတာ Large Hadron Collider ဆိုတဲ့ မြေအောက်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ particle accelerator ကြီးပေါ့။ မြေအောက်ပေ ၃၀၀ကျော် မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ 17 miles လောက်ရှည်တဲ့ tunnel ကြီးပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်က စတင် ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုထိ $5billion လောက်ကုန်နေပြီလို့ ဆိုထားပါတယ်။ Switzerland နဲ့ France နှစ်နိုင်ငံကို ခွပြီး Geneva နားမှာ ဆောက်ထားတာပါ။ နိုင်ငံပေါင်း ၈၅နှိုင်ငံက ပညာရှင် ရှစ်ထောင်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာပါ။ University တွေ lab တွေ အများကြီး ပါဝင်ကြတာပေါ့။
ရည်ရွယ်ချက် က အလင်းအလျင်နီးပါး accelerated လုပ်ထားတဲ့ oppsite direction က proton beam နှစ်ခုကို တိုက်စေမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 30 billion လောက်က Big Bang လို့ခေါ်တဲ့ ဧရာမပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်ပြီး စကြာဝဠာကြီး ဘယ်လိုစဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို လေ့လာဖို့တဲ့။ ဒီစက်ကြီးနဲ့ စမ်းသပ်လိုက်ရင် time and space ကို အခြားရှုဒေါင့်အသစ်က တွေ့မြင်လေ့လာနိုင်မယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့တွေ စိုးရိမ်နေကြတာက အဲဒီကနေatrillion degrees centigrade လောက် အပူချိန်ကို ထုတ်လွတ်လိုက်လို့ black hole ဖြစ်ခုဖြစ်လာပြီး ကမ္ဘာကြီးကို စုပ်ယူသွားနိုင်ပါသတဲ့ ......
မကြာခင်အချိန်မှာပဲ အဲဒီ Large Hadron Collider ကြီးကို စတင်ခလုပ်ဖွင့်လို့ proton တွေ စတင်လည်ပတ် ပါပြီ်။ Collide မလုပ်ခင် Proton တွေ လည်ပတ်တာ အရှိန်ရဖို့တော့ အချိန်တစ်ခုစောင့်ရမယ်ထင်တယ်။ လနဲ့ချီပြီး ကြာမှာပါ။
ဘာတွေလည်းတော့ မသိဘူး .... ကိုယ်မသိတဲ့ field ကို သွားစပ်စုရင် နွားပလာတာစားသလိုပဲ ..... စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ လျှောက်ဖတ်ကြည့်နေတာ .... Proton bean နှစ်ခုတိုက်ပြီး Black hole ကြီးပေါ်လာလို့ နေပြည်တော်ကြီးကို စုပ်ယူသွားရင်လဲကောင်းသား :D
Posted by little moon at 5:51 PM4comments:
Posted by little moon at 1:08 PM2comments:
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုတာ ကိုယ် တစ်တန်း နှစ်တန်း အရွယ်လောက်ကိုပြောတာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လှည်းတန်း ကုန်းဆင်းနားက ကောင်စီရုံးဘေး ပန်းခြံလမ်းမှာနေကြတယ်။ အမေ လွိုင်ကော်ကို မပြောင်းရခင် လောက်ကပေါ့။ ကျောင်းပိတ်ရက် စနေ သို့မဟုတ် တနင်္ဂနွေ အဆင်ပြေတဲ့တစ်ရက်ရက်မှာ အဖေက မြို့ထဲမှာ ရုပ်ရှင်လိုက်ပြလေ့ရှိတယ်။ အိမ်ကနေ ငါးမိနစ်ကျော်ကျော်လောက် လမ်းလျှောက်လိုက်ရင် လှည်းတန်း ဘူတာကို ရောက်တယ်။ အဲဒီကနေ မြို့ပတ်ရထား စောင့်စီးကြတာပေါ့။ အဖေက အိမ်က နံရံတစ်ခုမှာ လှည်းတန်းဘူးတာက ရထားအချိန်တွေကို ရေးထားတယ်ဗျ။ မြို့ထဲဖက်ကို ဆိုဘယ်အချိန်တွေ အင်းစိန်ဖက်ကို ဆို ဘယ်အချိန်တွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့ ... အိမ်ကထွက်တည်းက အချိန်ကိုက်ပြီး ထွက်လာတာပေါ့။
ရထားတွေက တစ်ခါတစ်ရံ အနည်းငယ်နောက်ကျတာကလွဲလို့ မလာတာမရှိဘူးဗျ။ လှည်းတန်းဘူတာကနေ မြို့ထဲ ဘုရားလမ်းဘူတာအထိ စီးသွားရတယ်။ ရထားခက တစ်ယောက်ကို တစ်မတ်ပေါ့။ ဘုရားလမ်းဘူတာ ရောက်ရင် စကော့ဈေးကို ဖြတ်ထွက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း ရုပ်ရှင်ရုံတွေဖက် သားအဖနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်သွားကြတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်က Traders Hotel ကြီးနေရာမှာ ပပ၀င်းရယ် ဂုဏ်ရယ် နှစ်ရုံ ကပ်လျှက်ရှိတာလေ။ အခု Central Hotel နေရာက မီးလောင်သွားတဲ့တော်ဝင်ရုပ်ရှင်ရုံ အပျက်ကြီးရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခက အပေါ်ထပ် ၅ကျပ်၊ အောက်ထပ်ကို ၄ကျပ်။ ကျွန်တော်က ငယ်သေးတော့ လက်မှတ်ဝယ်စရာ မလိုဘူး။ လက်မှတ်တစ်စောင်ပဲဝယ်ပြီး အဖေ့ပေါင်ပေါ် ထိုင်ကြည့်ရတာပေါ့။ ရုံထဲမ၀င်ခင် အဖေက နို့အေးချောင်းဝယ်ကျွေးလေ့ရှိတယ်။ တစ်ကျပ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရေငတ်ရင် ရေခဲရေသည်ဆီက တစ်ခွက် တစ်မတ်နဲ့ ရေခဲရေသောက်တာပေါ့။ သံရေပုံးလေးပေါ်မှာ ရေစစ်လေးနှစ်ခုလောက်ကို သံဖရိမ်နဲ့တပ်ထားပြီး ရေခဲတုံးလေး တင်ထားတာ။ သောက်မဲ့သူလာမှ လ ရေပုံးထဲကရေကို ရေခဲတုံးပေါ်လောင်းချပြီး အောက်ကခွက်လေးခံထား နောက်နှစ်ခါ သုံးခါလောက်လောင်း ပြီး ပေးတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ရေသန့်ဗူး ဆိုတာလဲ မရှိသေးပါဘူး။
တစ်ချို့ရက်တွေမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရင် လေဟာပြင်ဖက် လမ်းလျှောက်ပြီး ဆီချက်တို့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲတို့၊ အခေါက်ကင် အသားကင်နဲ့ ထမင်းပေါင်းလဲ လိုက်ကျွေးလေ့ရှိတယ်။ နှစ်ယောက်စားတာ အလွန်ဆုံး တစ်တယ် ဆယ့်နှစ်ကျပ်ပေါ့။ ပြီးရင် မြို့ပတ်ရထား၊ သို့မဟုတ် နံပါတ် (၈) လိုင်းကားနဲ့ အိမ်ပြန်ကြတာပေါ့။
ကြာခဲ့ပြီပေါ့။ မနေ့ညက သားလေးကို ကြည့်နေရင်း အဲဒီအကြောင်းလေးတွေ ခေါင်းထဲပြန်ပေါ်လာလို့။ သားလေး နည်းနည်းကြီးလာရင် အဖေက ကျွန်တော့်ကို ရုပ်ရှင်လိုက်ပြခဲ့သလိုပဲ သားလေးကို လဲလိုက်ပြရမယ် လို့ တွေးနေမိတယ်။ ပျော်စရာကြီး .....
Posted by little moon at 12:10 PM6comments:
မိုးလည်း ဖြိုင်ဖြိုင်ရွာ၏။ နေလည်း ကျက်ကျက်ပူ၏။ မိုးသည်း၍ စဖိုသည် ဆင်းရဲခဲ့ရ၏။ ကျက်ကျက်ပူသောနေကြောင့် ပုဇွန်သေခဲ့၏။ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုသည် တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်၏။ အံဖွယ်ရာသီပေ။
ဆန့်ကျင်ဘက်တို့ကြောင့် လူ့ဘုံသည် လှုပ်ရှား၏။ ဆေးရောင်သည် တစ်ရောင်တည်း မရှိစကောင်း။ အပူချည်းသက်သက်၊ အအေးချည်းသက်သက် မရှိစကောင်း။ တစ်ဖက်သတ် တစ်ခုစွဲသာ ရှိအံ့။ လူ့ဘုံသည် တိတ်ဆိတ် အေးစက်သွားပေလိမ့်မည်။ အဘယ်မှာ တိတ်ဆိတ်သင့်အံ့နည်း။ လူသည်လည်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းငှာ အဘယ်မှာ စွမ်းနိုင်ပါအံ့နည်း။ အမြဲလှုပ်ရှားမည်သာ။
လှုပ်ရှားလျှင် ဆန့်ကျင်ဘက်တို့၏ တိုက်ပွဲကြောင့် ဖြစ်ရပေမည်။ အမှောင်ကို ဆန့်ကျင်လိုက်၍သာ အလင်းပေါ်ခဲ့သည်။ ညကို ဆန့်ကျင်လိုက်၍သာ ရောင်နီပေါ်ခဲ့သည်။ လူဗီဇသည် ဆုတ်နစ်မှုကို ဆန့်ကျင်၏။ အမှောင်ကို ဆန့်ကျင်၏။ မညီမျှမှုကို ဆန့်ကျင်၏။ ဓမ္မတာပင်။
သစ်ပင်ငယ်သည် စိမ်းလန်းခဲ့ပြီ။ မှိုင်းညို.ခဲ့ပြီ။ ဖွံ့ထွားစည်ပင်ခဲ့ပြီ။ မိုးရေကို အ၀သောက်ရသောကြောင့်ဟု မိုးက ဂုဏ်ဖော်၏။ နေခြည်ကို အ၀သောက်ရသောကြောင့်ဟု နေက ဟိတ်ထုတ်၏။
သစ်ပင်ငယ်သည် မိုးနှင့်နေတို့၏ ပဋိပက္ခကြားတွင် ကြီးမားထွားကျိုင်းခဲ့လေသည်။
လမ်းကလေးပေါ်၌ ယင်းမာပွင့်ကလေးများ ကြွေလျက်ရှိ၏။ မိုးစဲလျှင် ယင်းမာနံ့ တပျံ.ပျံ. သင်းကြလိမ့်မည်။ ပန်လိုသူ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ပန်လိုသူ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ယင်းမာပန်းကလေးတို့သည် သူတို့၏ ရနံ့ကို စွန့်ကြမည် မဟုတ်။
ပန်းကလေးတို့သည် ရာသီအလှည့်ကျ ပွင့်ကြရန် မိမိတို့ တာဝန် မလစ်ဟင်း၊ ကိုယ်၏ အစွမ်းအစ မှန်သမျှတို့ကို ထုတ်၍ အလှည့်ကို စောင့်မျှော်ကြရှာသည်။ မိမိတို့ အခါတွင် မြိုင်မြိုင် ပွင့်လိုက်ကြ၏။ နောက်ရာသီတွင် ပွင့်ကြမည့် ပန်းအတွက် ကြွေပေးလိုက်ကြ၏။ ငါသာလျှင် မင်းမူမည်ဟု စိုးစဉ်းမျှ မတွေး။ စိုးစဉ်းမျှမတွက်။ သူတစ်ပါး၏ အစွမ်းဂုဏ်ကို ပြန်ရန် နေရာပေးကြလေ၏။
မိုးစဲချိန်တွင် လူတို့သည် ပန်းများကို ကောက်၍ နမ်းသူလည်း နမ်းကြ၏။ အမှတ်တမဲ့ နင်းချေသွားကြသူတို့လည်း အပုံပင်။ သို့ရာတွင် သူတို့၌ နာကြည်းစိတ်၊ လောကကို မလိုစိတ်၊ နှာခေါင်းရှုံ.လိုစိတ် မရှိ။ အေးဆေးစွာပင် ခွင့်လွှတ် ကြည်ဖြူ နိုင်ကြ၏။
ယင်းမာပန်းကလေးတို့သည် ဤလောကထံမှ တစ်စုံတစ်ခု ရယူလိုခြင်း မရှိ။ သူတို့သည် သူတို့ပိုင် ရနံ့များကို ပေးကမ်းရန် အလို့ငှာသာလျှင် ရောက်လာကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိခင် သစ်ပင်ကြီးသည် သားသမီးငယ်များကို မည်သည့်အရာကိုမျှ မတောင့်တရန် သွန်သင်လိုက်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။
Posted by little moon at 3:41 PM No comments:
သရစ်ပြင် ဆင် ပြန်သမို့။
Posted by little moon at 3:37 PM 1 comment:
05 Sep 2008 3:18PM @ Yangon
အခုလေးတင် ငလျင်လှုပ်သွားပါတယ်။ ကုက္ကိုင်းက ကျွန်တော့်ရုံးမှာ အလုပ်ထိုင်လုပ်နေတုန်း ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ငြိမ့်ကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီး ဆက်တိုက် ၁၅စက္ကန့်လောက် လှုပ်သွားပါတယ်။ သိပ်အားအပြင်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အထပ်မြင့်ပေါ်ကလူတွေကတော့ တော်တော်လေး သိသိသာသာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အပျက်အစီးမတွေ့ရပါဘူး။ ကြောက်ပြီး တိုက်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ သူအချို့တော့ရှိတာပေါ့။ GTalk ကနေ ရန်ကုန်တွင်းက တစ်ခြားသူတွေကို မေးကြည့်တာ တစ်ချို့ဆို လှုပ်သွားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဆူနာမီမတိုက်ခင်က လှုပ်သွားသလောက်တော့ မပြင်းဘူးဗျ။
နာဂစ်ဆိုတာကြီး ပြီးသွားလို့ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်လို့မဆုံးသေးခင်မှာ နောက်ထပ် ဘေးဆိုးကြီး တစ်မျိုး တော့ ရောက်မလာပါစေနဲ့ ....
Posted by little moon at 3:23 PM 1 comment:
Posted by little moon at 9:54 AM6comments:
မောင်ဇူလိုင်က စီပုံးမှာလာအော်သွားတယ်။ တက်ထားပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ဘယ်လို တက်တာပါလိမ့်ပေါ့ ... တက်တယ်ဆိုတော့ ဆင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဘယ်ကို မဆင်းပဲ ဘယ်ကို တက်ရမှာတုန်း .....ကိုယ်ငယ်ငယ်က အပြင်းဖျားပြီး တက်ဖူးတယ်။ ကံကောင်းလို့မသေခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီလိုတက်တာကြီးတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဇူလိုင်ရဲ့ဘလော့ကို သွားပြီး အခြေအနေကိုသုံးသပ်ရတယ်။ My view point တဲ့ ... ကိုယ်သိတဲ့ View Point က ရှုခင်းလှလှလေးတွေ ကြည့်ပြီး ဘီယာသောက်တဲ့ဆိုင် ...မဟုတ်သေးပါဘူး .... ခဏလောက် အသာ အကဲခပ်လိုက်တော့မှသဘောပေါက်သွားတာက သူရေးထားတဲ့ ပုံစံမျိုး ကိုယ့်ဘလော့မှာ လိုက်ရေးရမှာကို .... အဲဒါကို တက်တယ်လို့ ခေါ်သကိုး .... ဖြစ်ရလေ ... ရေးဆိုတော့လည်း ရေးကြတာပေါ့။
ကိုယ့်ရဲ့နာမည် - TK @ ကိုကြီးထွန်း
ကိုယ်ကိုသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် - ကြီးသူများက ဘဲလေး၊ ကောင်လေး ... ရွယ်တူများက နံမည်ခေါ်တယ် ... online မိတ်ဆွေများက ကိုလစ်တဲမွန်း၊ ငယ်သူများက ကိုကြီးထွန်းတဲ့
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ် - ရွှေတိဂုံဘုရားနားက ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း အပေါ်ဆုံးထပ် တိုက်ခန်းလေးမှာ
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် - လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုလိုသော ကိုကြီးထွန်းသည် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆိုမရနိုင်ပါရှင် ....
အရောင်ဆိုရင် - အပြာရောင်အနု variation တွေကို ကြိုက်တယ်
အ၀တ်အစားဆိုရင် - စပို့ရှပ်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ကွာတား ဘောင်းဘီတိုတွေလည်း ကြိုက်တယ်
အစားအစာဆိုရင် - အဆိပ်မဖြစ်တဲ့ စားကောင်းတာမှန်သမျှ ... လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေးပဲ
အသောက်ဆိုရင် - ခွေးမသောက်တဲ့အရည်တွေ အရမ်းကြိုက်တယ် (ဘီယာ၊ ၀ီစကီ၊ ဂျင်၊ ဗော်လ်ကာ...)
အားကစား - ကိုယ်တိုင်ကစားတာဆိုရင် ဘောလုံး၊ ရေကူး၊ ခြင်းလုံး၊ ကြည့်တာ ဘောလုံး တင်းနစ်
ပစ္စည်းဆိုရင် - Handset, Camera, Computer... Electronic ပစ္စည်းလေးတွေကို ရူးသွပ်တယ်
သီချင်းဆိုရင် - Sweet Sweet Smile Everyday ... အဲဒီလို ခပ်အေးအေးလေးတွေကြိုက်တယ်၊ Classical piano symphony တွေလည်းကြိုက်တယ်
စာရေးစာဆရာ - မြန်မာလိုရော ဘိုလိုရော များစွာများစွာပဲ
စာအုပ် - အခုနောက်ဆုံးကြိုက်နေတာက Jim Colllins ရဲ့ Good to Great
Life style – ပျော်သလိုပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ - အပျင်းထူရတာ
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် - Europe ကို စိတ်ကြိုက်လည်ဖို့ sponsor ပေးမဲ့လူ
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက - မိန်းမနဲ့ သားလေးပေါ့
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက - ကိုယ့် MD ကိုနေ
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက - များစွာ များစွာ
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက - Jack Deniel
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက - အာဏာ၊ လက်နက်တို့နဲ့ နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်တတ်သူများ
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် - ဟိုတစ်ရက်က Absolute Vodka ပုလင်းကြီးကို လက်နဲ့တိုက်မိပြီးစားပွဲပေါ်က ပြုတ်ကျမလိုဖြစ်လို့ ဒိုင်ဗင်ထိုး ဖမ်းလိုက်ရတဲ့အချိန်
အကြောက်ဆုံးအချိန် - ဆိုင်မှာနင်းကန်စားသောက်ပြီး စာပွဲထိုးက bill လာပေးတဲ့အချိန်
အပျော်ဆုံးအချိန် - အချိန်တိုင်းနီးပါး ပျော်နေတာပဲ ကလေးဘ၀ လွိုင်ကော်မြို့နဲ့ မိထ္ထီလာ ရှမ်းတဲ လေတပ်စခန်းမှာ နေခဲ့ရတဲ့နေရက်တွေက အတော်ပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်
အမှတ်တရနေ့ - အမှတ်တရတွေများလွန်းလို့ တစ်ရက်ကြရင် စာအုပ်ထုတ်မလားလို့
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု -
သောက်ချင်တာတွေသောက်လို့ရတဲ့ မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင် Mini Bar လေးတစ်ခုပါတဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့၊ TV, DVD Player နဲ့ အခွေတွေအများကြီးလဲရှိတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေ တင်းနစ်ပွဲတွေ အကုန်ကြည့်လို့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးတစ်ခု
အချစ်ဆိုတာ - ချစ်တယ်ပေါ့
အမုန်းဆိုတာ - ပူလောင်ခြင်း ခါးသီးခြင်းပေါ့
အလွမ်းဆိုတာ - မရနိုင်တာကို တမ်းတနေခြင်းပါ
သံယောဇဉ်ဆိုတာ - နှောင်ဖွဲ့ခြင်းပေါ့
ဘ၀ဆိုတာ -လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ မှန်မှန်လေးလျှောက်လှမ်းနေခြင်းပေါ့
သူငယ်ချင်းဆိုတာ - ဘ၀ရဲ့ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့
ချစ်သူဆိုတာ - အိမ်ကမိန်းမကြီလေ ....
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ် - စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က - "Nothing lasts forever..."
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း - ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်တာဝန်ယူ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်သတ်မှတ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ
Posted by little moon at 1:14 PM 22 comments:
Network is the Computer..... ဒီစကားလေးကို Sun Micro system က လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀လောက် ကတည်းက ပြောခဲ့တာပါ။ Sun ဆိုတာ အများသိကြတဲ့ Sun Workstation တွေ၊ နံမည်ကြီး Java Language၊ Solaris Unix Operating System တို့ထုတ်လုပ်တဲ့ company ပေါ့။
User တွေသုံးတဲ့ computer တွေကို terminal တစ်ခုအနေနဲ့ ပဲထားပြီးသုံးမယ့် အစီအစဉ်ပေါ့။ Computer ထဲမှာ minimum level ပဲ software application တွေကိုထားမယ်။ User သုံးချင်သမျှ Application တွေကို Network ပေါ်ကနေ အသုံးပြုလို့ရအောင် ဖန်တီးထားမယ်။ ဒီပုံစံက ဟိုးအရင်က Mainframe ကြီးတွေကို terminal တွေနဲ့ သုံးတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ NIC Card ပေါ်က BootROM ကနေ PC ကို boot လုပ် ပြီးရင် Novell Server ကို login လုပ်ပြီး သုံးတာမျိုး၊ Windows NT မှာ Citrix Winframe နဲ့သုံးတာမျိုး စတာတွေနဲ့ idea ခြင်း ဆင်တူတယ်ဗျ။ Computer ကို TV တစ်လုံးလောက်အဆင့်ဖြစ်သွားအောင်၊ TV ဖွင့်ပြီး Cable ကတဆင့် အစီအစဉ်တွေကြည့်တာမျိုး.... အသုံးတွင်ကျယ်လာအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။ PC ကို Switch on လုပ်လိုက်ရင် Console တစ်ခုတက်လာမယ်။ အဲဒီကနေ ကြိုက်တာဆက်လုပ်ပေါ့။ Office application တွေသုံးချင်တာလား... Game ဆော့ချင်တာလား .. Email ပို့မလား ..... Chat လုပ်မလား ... ဈေးဝယ်မလား .... ကိုယ့် Corporate ရဲ့ Application ကို သုံးမလား .. အားလုံးကို internet ပေါ်ကတဆင့် သုံးလို့ရအောင် စီစဉ်မှာ။ Sun ရဲ့ idea က လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀က အရမ်းကို ခေတ်ရှေ့ပြေး သလိုဖြစ်နေပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည် ပေါ်မလာခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ဒီအိပ်မက်က တကယ်ဖြစ်လာဖို့ လမ်းစတွေ တွေ့နေရပါပြီ။
ကျွန်တော့်အမြင်မှာ Google အနေနဲ့ Microsoft နဲ့ Mozilla တို့ကို ပြိုင်ဆိုင်ပြီး browser market share ကို ကြီးစိုးချင်လို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး တစ်ခုလောက်ကြောင့် ဒီ Chrome Browser ကိုထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Sun ရဲ့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Network is the Computer ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို လျှောက်မဲ့ ပထမခြေလှမ်းလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီ Browser လေးဟာ OS ပေါ်က OSလို့အမည်မတတ်တဲ့ OS တစ်မျိုးပါပဲ။ Process Isolation ပါတယ် VM ပါတယ်။ Web application တွေကို run လုပ်ပေးမဲ့ Framework တစ်ခု OS တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နေပြီ။ ဒီ Chrome Browser ရဲ့ ဒုတိယ တတိယ မျိုးဆက်လောက်ကြရင် Windows လို Linux တို့လို OS တွေကို မှီခိုပြီး runတာမဟုတ်တော့ပဲ သူကိုယ်တိုင်က OS တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆရတယ်။
မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ PC ကို switch on လုပ်လိုက်ရင် BIOS ကနေ Google Browser တက်လာမယ်။ အဲဒီကနေ office application တွေသုံးမယ် (Wordprocessing, Spreadsheet, Planner, Calender) ရုပ်ရှင် ဗွီဒီတွေကြည့်မယ် Email ပို့မယ်... စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့ .... သာမန် User သုံးတဲ့ PC မှာ ဘာ program မှ မရှိတော့ဘူး။ လုပ်ချင်တာအားလုံးကို Browser ထဲကပဲလုပ်မယ်။ File သိမ်းတာတောင် internet ပေါ်က ကိုယ်ပိုင် disk space မှာသိမ်းမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် End User သုံးတဲ့ PC တွေမှာ OS ဆိုတာမလိုတော့ဘူး။ Server ကြီးတွေအတွက်ပဲ OS ဆိုတာကို သုံးတော့မယ်။ PCကလည်း very thin client ဖြစ်သွား မယ်။ Desktop ကို Microsof ကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်ကုန်လွန်လို့ တန်ဖိုးနည်း dump terminal ဆန်ဆန် Set top Box Computer အမျိုးအစားတစ်ခု ပေါ်လာမလားလို့ တွေးနေမိတယ်။
Posted by little moon at 10:06 AM 1 comment:
Posted by little moon at 1:33 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် web ကို အသုံးပြုနေကြရာမှာ အရင်ကလို web page လေးတွေကို ခေါ်ယူနေတဲ့အဆင့် မဟုတ်တော့ပါဘူး browser ကို အသုံးပြုပြီး Application များကို run နေတဲ့အဆင့် ဖြစ်လာပါပြီ။ Mail ပို့မယ်၊ online ပေါ်မှာ video ကြည့်မယ်၊ Chatting လုပ်မယ်၊ web-based gameတွေ ကစားကြမယ်၊ bank ကို ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်မယ်၊ shopping လုပ်မယ် ... စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အဲဒီတော့ ဒီကနေ့ အဲဒီလို အဲဒီလို web application တွေနဲ့ user တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ browser တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ နဲ့ develop လုပ်ရာမှာလည်း totally new idea နဲ့ start from the scratch ရေးသားဖို့ Google က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Chrome browser ကိုထုတ်လုပ်ပြီး Browser line ကို ၀င်ရောက်လို့လာပါပြီ။ Open source project တစ်ခုအနေနဲ့ပါ။
Google အနေနဲ့ gmail, photo, calender, documet, google reader စသည် စသည်ဖြင့် rich web application တော်တော်များများ ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ သူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ application တွေအပါအ၀င် အခြား web application တွေ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် run လုပ်နိုင်ဖို့ (faster, stable and secure) ကိုယ်ပိုင် browser ဆိုတဲ့ idea ကို စဉ်းစားခဲ့ပုံရပါတယ်။
"On the surface, we designedabrowser window that is streamlined and simple... Under the hood, we were able to build the foundation ofabrowser that runs today's complex web applications much better," ဆိုပြီး Google's official blog ထဲမှာ ပြောထားပါတယ်။
ဒီ Browser အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပုံလေးကလည်း သဘောကျစရာပါ။ ၃၈မျက်နှာပါတဲ့ ရုပ်ပြကာတွန်း စာအုပ်ကလေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ chrome browser ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝင်မဲ့ features တွေ၊ browser ရဲ့ နောက်ကွယ် က technical concepts တွေကို သာမန်လူနားလည်အောင် layman language နဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ( Google chrome comic book)
Posted by little moon at 12:25 PM No comments:
more photos of Tun Lin Tun
Posted by little moon at 12:42 PM3comments: